संक्रमितका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन सिलिन्डर अभाव
१५ वैशाख, काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमितका लागि अत्यावश्यक मानिएको अक्सिजन आवश्यकताअनुसार भए पनि बजारमा सिलिन्डर अभाव खड्किन थालेको छ ।
मन्त्रालय सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार सिलिन्डर ल्याउन कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको छ । ‘नेपालमा सिलिन्डर बन्दैन, यदि सिलिन्डर किनेर घरमा राखियो भने भर्ने भाडा बजारमा नभेटिन सक्छ,’ उनले भने, ‘मार्केटमा भएका सिलिन्डर बाहिर देश पनि पठाउनुभएन ।’
सरकारले अक्सिजन अभाव नहुने तर सिलिन्डर अभाव हुनसक्ने आँकलन गर्दै विदेशबाट ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको स्पष्ट पारेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ३० अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट रहेको छ । जसबाट दैनिक २ हजार ५ सय ४९ सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सक्ने क्षमताका छन् ।
निजी क्षेत्रले प्रतिदिन ७ देखि ८ हजार सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका छन् । केही अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन टयांक छन् । देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ६ देखि ७ हजार सिलिन्डर छन् ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालले बजेट सुनिश्चितता भए पनि समयमा हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) तयारी अवस्थामा नराखेको देखिएको छ । मन्त्रालयले युनिट छिटो सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न भन्दै सबै अस्पताललाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
विश्वराज पोखरेल एआइजीमा बढुवाकालागी सिफारिस
प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला कहिले ?
खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई काँग्रेसको समर्थन
अमेरिकाको कोलोराडोमा गोलीबारी, प्रहरीसमेत १० जनाको मृत्यु
चन्द समूह र बुढाथोकी नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबीच तीन बुँदे सहमति
आइतबार घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको मूल्य भने स्थिर
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउँदो फागुनमा नहुने
पूर्वराज्यमन्त्री गौचनको निधन
सेयर बजार नयाँ उचाइमा, पुग्यो ३ हजार ९४ अंक
सप्तरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु